အရွယ်အစား (H * w *d*)
705 * 527 * 800 မီလီမီတာ
*2အံဆွဲ
* အပြည့်အဝ extension ကိုအပြည့်အဝ drawer slides
* built-in ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ
* built-in လက်ကိုင်
*2နာရီမီးခံနိုင်ရည်
2004 ခုနှစ်မှစ. Foshan Woshan Woshan Woshan City တွင် Foshan Weierxin Safe Co. , Ltd သည်0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့်0န်ဆောင်မှုတို့ဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Weierxin Safe သည်မီးလောင်ရာများ, ရုံးလုံခြုံမှု, ဟိုတယ်များ, သေနတ်များ, သေနတ်များ, စီ။ အီး။ ယူနစ် 500,000 ကျော်ကိုနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုအတိုင်းအတာဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအိမ်, ရုံး, ဆေးရုံ, ဆေးရုံ, ဟိုတယ်စသည့်နယ်ပယ်များစွာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ Weierxin Safe သည်လူတို့နေထိုင်ရာ, အလုပ်နှင့်ကစားသည့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်ကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။ အကောင်းဆုံးသောအတန်းအစားတန်ဖိုး, သုံးစွဲမှုလွယ်ကူခြင်း, ကြာရှည်ခံခြင်း, ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, Weierxin Safe တွင်ပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင်ရောင်းဝယ်သူ 1000 ကျော်နှင့်သစ္စာစောင့်သိသောဖောက်သည်5သန်းကျော်ရှိသည်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုလည်းကမ္ဘာအနှံ့တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်အများအပြား၏ oem ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ 2004 ခုနှစ်မှစ. ထုတ်ကုန်များကိုအစဉ်အမြဲအကောင်းမြင်ပြီးတိုးတက်လာပြီးပိုမိုများပြားသောအသုံးပြုသူများကိုလိုက်နာရန်နေတုန်းပဲ။ ကောင်းမွန်သော OEM နှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်& OMD အတွေ့အကြုံ ..oem / odm အမှာစာများကိုကြိုဆိုသည်။ ကျနော်တို့ r ကိုအတွက်ကြီးစွာသောအားသာချက်ရှိသည်&D, အထူးသဖြင့်မီးလောင်ခြင်းဆိုင်ရာ safe တွင်ဖောက်သည်များ၏လုံခြုံမှုကိုစုဝေးစေပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဒီဇိုင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်များကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
A: ဟုတ်ကဲ့, ထုတ်ကုန်ပေါ်ရှိသင်၏လိုဂိုကိုပုံနှိပ်ပါ။
A: ဟုတ်ကဲ့, ငါတို့မှာမပို့ခင်မှာ 100% စမ်းသပ်မှုနဲ့ QC စစ်ဆေးမှုရှိတယ်။
3. AWe, Rosh, FCC
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထုတ်လုပ်သူ, လက်ကားရောင်းသူများ, လက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ,0န်ဆောင်မှုပေးသူ,0န်ဆောင်မှုပေးသူ,0န်ဆောင်မှုပေးသူ, မြင့်မားသောအဆုံးအင်္ဂါရပ်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကွာအဝေးကိုဘဏ်များ, ရုံးများ, ကျောင်းများနှင့်ကောလိပ်များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ဖောက်သည်များအားအများဆုံး utility ကိုသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များဖြင့်ပေးသည်။ ငါတို့ Foshan Weierxin Safe Co. , Ltd သည်မီးခံခြင်းစစ်ဆေးမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြုလုပ်သည်& ကျွန်ုပ်တို့၏အကွာအဝေးတွင်အမှားအယွင်းကင်းသောထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံပို့ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကွာအဝေးပေါ်တွင်ဖောက်ထွင်းခြင်းစမ်းသပ်မှု။ ဤထုတ်ကုန်များကိုနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့်အညီထုတ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေ့အကြုံရှိသောပညာရှင်များအဖွဲ့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များကထောက်ပံ့ပေးသည့်သတ်မှတ်ချက်များအရထုတ်ကုန်များကိုကမ်းလှမ်းရန်အတွက်၎င်းတို့သည်ရရှိနိုင်သည့်သာယာအဆင်ပြေမှုများအားဖြည့်ဆည်းပေးသည်။0န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသင်တန်းများပေးသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုနေစဉ်ပြ problem နာမရင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းသင်တန်းများပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်နှင့်အရည်အသွေးရှိသောချဉ်းကပ်နည်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်တည်ရှိပြီး0န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုလုံခြုံစိတ်ချရသော0န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုလုံခြုံစေခဲ့သည်။